Ardamax Keylogger v4.0.5 basic edition full with crack/serial ~ လမင်းတရာ
Ardamax Keylogger v4.0.5 basic edition full with crack/serial
IN Hacking Tools - ON 11:41 AM No comments
Ardamax Keylogger v4.0.5 basic edition | 3.8 MB
Keylogger ဆိုတာနဲ့ဘာလုပ်လို့ရတာလဲ..၊ ဘယ်လိုအသုံးပြုရသလဲဆိုတာတော့ရှင်းပြစရာမလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ အခုဒီကောင်လေးက Windows 8 မှာပါကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပါတယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက သူ့ကို Install မလုပ်ခင် Antivirus ကိုတော့ပိတ်ထားပေးပါ။အချို့အားကောင်းတဲ့ Antivirus တွေက ဒီ Program ကိုခွင့်မပြုတတ်တာကြောင့်ပါ။ဒါက ခြေရာခံ Software ဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာတွေကို Support လုပ်သလဲဆိုတာအောက်မှာကြည့်လို့ရအောင်မူရင်းလင့်ကအတိုင်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Invisible mode - makes it absolutely invisible to anyone. Ardamax Keylogger is not visible in the task bar, system tray, Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows7Task Manager, process viewers (Process Explorer, WinTasks etc.), Start Menu and Windows Startup list.
Download>>> Solifiles (or) Tusfiles